Best MediaCoder Alternative: dhakhso ah, More boosaska badan, qaabab More
> Resource > bedelan karo > Best MediaCoder Alternative: More Feature-Riched All-in-One Video Converter
Best MediaCoder Alternative: More Feature-Riched All-in-One Video Converter
MediaCoder waa software ah coder warbaahinta caalamiga ah. Waxaa isku xira technology audio iyo video galay hab hagaajin karo in aad qaadi karto si buuxda gacanta ugu muuqaalada transcoding aad. Laakiin xataa ay gelitaanka u gaar ah, MediaCoder ma aha gabal ugu fudud ee software in la isticmaalo, taas oo aan ku haboon bilowga ah. The tayada wax soo saarka video waa culays iyo u baahan in la hagaajiyo.
Sidaas, waa waxaa kale oo ay software MediaCoder ah? Noqon doonaa ku faraxsan in ay ogaadaan in kale oo ku habboon in ay MediaCoder waa in xaqiiqda ah in aad Wondershare Video Converter Ultimate for Mac ( version Windows la heli karo). Waa user-friendly dheeraad ah, wax ku ool ah oo fudud, iyo qaato shaqadaas adag ee sireed iyo helitaanka codec ugu dambeeyay.
Waa maxay Tani Alternative MediaCoder fiican
Sida loo rogo ama Videos la Tani Alternative MediaCoder
Wondershare Video Converter Ultimate Uu leeyahay muuqaalada u gaar ah oo aan la isku aadiyo karo by MediaCoder. Fadlan hoos ka akhri si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah.
1. Beddelaan ee 30X Speed ​​Fast
Lahaanshaha file ballaaran si loogu badalo? Ma aad u baahan doontaa inaad waqti badan ku bixiyaan diinta video. Kale MediaCoder Tani waxay ku dhameysan doonta kaalinta diinta faylasha aad ee kaliya Dhawr daqiiqadood u xawaare aan caadi aheyn. Sidoo kale waxaad dajiyaan karaa sida badan videos intii suurto gal ah si loogu badalo waqti isku mid ah. Software wuxuu taageeraa diinta Dufcaddii.
2. Work Si fiican aan Xudduudka kasta
Waxaad ku nasan karaa hubiyo in Wondershare Video Convertor Ultimate badalo karo files aan xad kasta. Iyadoo codsigan, aad u bedeli karaan wax kasta oo ku dhawaad ​​qaab video caanka ah, sida AVI, MP4, MKV, MOV, wmv, VOB, iwm Ma jiraan wax xadeyn ah ee size file max, xayiraad in beddelaad ah maalin kasta. Geedi socodka shaqada oo dhan waa siman oo xasiloon.
3. Sare Conversion Speed
MediaCoder kale waxay la shaqeysaa xawaare sare leh technology APEXTRANS ™. Iyadoo la barbar dhigo xawaaraha diinta la converters weyn oo kale oo ku saabsan suuqa ka, taas kale MediaCoder Guuleystay oo dhan oo iyaga ka mid. Waxaa badasha 30X xawaare ka dhaqso badan wax kasta oo uu diinta Islaamka ee lagu iibiyo suuqa.
4. An All-in-One Video Converter
Kale MediaCoder Tani waxay u qalmo magaca isagoo xidhmo oo dhan-in-ka mid ah. Software waa is-dhexgalka ee diinta videos, sixiddiisa videos, degsado videos ka goobaha video wadaagga, iyo DVDs gubanaya. Waxaad noqon doontaa yaabeen sida boosaska badan waa. Ka sokow, waxaad u isticmaali kartaa in aad ku darto metadata si aad filim Lugood, show TV oo guriga video. Daawashada filimada ku saabsan qalabka Apple noqon doontaa mid ka Raaxo aad si.
5. OS Compatiblity
Wondershare Ayaa waafaqid la Windows ka hawlgala nidaamyada, sida Windows NT4, 2000, 2003, XP, Vista, 7, iyo Windows 8. Waxa kale oo ay taageertaa macruufka ah sida Mac, oo ay ku jiraan OS Mac X 10.11 (El Capitan), 10,10, 10.9 , 10.8, 10.7, 10.6.
Sida aan kor ku soo sheegnay, waxaa aad u sahlan in ay isticmaalaan la interface user-friendly ah. Kaliya in aad gaari karo hawlaha qaab beddelidda in qasabno yar.
Talaabada 1: dejinta aad videos galay software this by jiita iyo dhibic. Ama waxaad riixi kartaa "+" ay ku darto files aad.
Talaabada 2: Dooro qaab file doonayo in ay leeg- wax soo saarka.
Talaabada 3: Riix badhanka diinta ku yaal dhinaca midig hoose ee interface ka.
Wondershare Video Converter Ultimate waa ka duwan oo ah in ay sida ugu fiican MediaCoder sida fudud, functional oo sahlan in ay isticmaalaan convertor file. Waxaa idinka Koriya waqti badan la xawaaraha diinta degdeg ah iyo habka shaqada siman. Sidoo kale waxa aad noloshaada inta badan ka sahlan ay dhexe taasoo ah. Just tago ka hor in ay isku day ah.
Best Dr. DivX Alternative: Beddelaan Video, Edit Video, Guba DVD
Best Ant Video Convertor Alternative: shaqee si dhakhso ah, Taageero More qaabab
Hel MetaX Best Kale
Top 10 iPhoto lagu bedelan karo
Alternative Si Winamp
Top Toban Cyberlink PowerDVD lagu bedelan karo
Top 10 Adobe jilitaankii Qaybaha lagu bedelan karo
FFMPEG Alternative: A dhakhso Ma-All Video Converter
Tenorshare Lugood Data Recovery Alternative: Ladnaansho iPhone, iPad iyo iPod taabashada